Promo.com: Isihleli Esilula Sevidiyo Esiku-inthanethi Samavidiyo Womphakathi Wezindaba Nezikhangiso Zomphakathi | Martech Zone
I-Promo.com: Isihleli Esilula Sevidiyo Esiku-inthanethi Samavidiyo Ezokuxhumana Komphakathi kanye Nezikhangiso Zomphakathi
NgoMsombuluko, Juni 24, 2019 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 27, 2021 Douglas Karr
Noma ngabe ushicilela umsindo noma ividiyo, uyazi ukuthi kwesinye isikhathi lokho okuqukethwe empeleni kuyingxenye elula. Faka ukuhlela nokwenza kahle kwepulatifomu ngayinye yezenhlalo futhi manje uchitha isikhathi esiningi ekukhiqizweni kunasekurekhodeni. Lokhu kuphazamiseka yingakho amabhizinisi amaningi egwema ividiyo yize ividiyo iyindlela ehehayo.
Promo.com iyipulatifomu yokudala ividiyo yamabhizinisi nezinhlangano. Basiza abasebenzisi ukudala okuningi kokuqukethwe okubukwayo namavidiyo angenamkhawulo ukukhuthaza noma yini abayifunayo ngempumelelo. Ipulatifomu yokuhlela ividiyo ekulula ukuyisebenzisa ekuvumela abasebenzisi ukuthi benze ngezifiso amavidiyo ahlanganiswe ngokuphelele ngabaqambi abawine imiklomelo - futhi ifaka phakathi ukukhangisa, ukukopisha nokufanisa umculo.
Iqembu elikuPromo.com lingivumele ngishicilele le vidiyo emfushane engithathe imizuzu embalwa ukuyenza. Amavidiyo esitoko, isitayela, nomculo konke kutholakala ngesifanekiso engisikhethile.
Okuhle kunakho konke, ipulatifomu ikhiqize ngokuzenzakalela ukubuka okulungiselelwe kwe-Instagram kanye nevidiyo eqondile. Ngenze ukuhlela okuncane kumafonti osayizi, kepha lokho kuthathe imizuzwana embalwa nje!
Usebenzisa i-Promo.com, ungakha amavidiyo noma izikhangiso zamavidiyo, kufaka phakathi:
Okuthunyelwe kwevidiyo ye-Facebook nezikhangiso
Amakhava Wevidiyo We-Facebook - leli thuluzi lamahhala alidingi ukubhalisa!
Okuthunyelwe kwamavidiyo we-Instagram nezikhangiso
Okuthunyelwe Kwamavidiyo Nezikhangiso ze-LinkedIn
Amavidiyo we-Youtube nezikhangiso
Ipulatifomu inezithombe zesitoko nezifanekiso ezilungele ukuhambela Amabhizinisi, Izakhiwo Nezindawo, Ukumaketha, Ukuvakasha, E-commerce, kanye neGaming. Ungathola futhi amavidiyo wezinsuku ezikhethekile, intwasahlobo, iphasika, usuku lukaSt. Patrick, usuku lwezithandani, noma usuku lomdlalo.
Yenza ividiyo yakho yokuqala ye-Promo.com njengamanje:
Dala ividiyo yePromo.com
Tags: Ukukhushulwapromo.comukukhangisa komphakathiividiyo yesitoko
I-Pattern89: Ukukhangisa i-AI Software Yokukhangisa Kwakho Kwedijithali